မြန်မာ့ရိုးရာဗေဒင်: သည်အဖေ သည်သမီး သည်ခရီးနီးသလား
လူတိုင်း တွင် ရည်ရွယ်ထားသော ဘ၀ခရီး ဟူသည် ရှိကြ၏။ တစ်ချို့သော သူတို့က သာမန် ခရီးငယ်မျှကိုသာ ရည်ရွယ် လျှောက်လှမ်းလို၏ ။ အချို့မူကား ခက်ခဲကြမ်းတမ်းစေဦး …ရှည်လျား ကြာမြင့်ပါစေဦး ၊ ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာရာ သို့ ရည်ရွယ်ပြီး လျှောက်လှမ်း၏။ အလျား ဘယ်လောက်ပင် ရှည်ရှည် ၊ ကာလဘယ်လောက်ပင် ကြာကြာ ….ဆူးခင်းကာ မီးလိုပူစေ ဦးတော့ .. ဖ၀ါးမြေချ လှမ်းမည်သာ။
အမေစု (၀ါ) ပြည်သူချစ်သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် ယင်းကဲ့သို့သော အမျိုးသမီးကြီး တစ်ဦး ဖြစ်၏။
ဤဆောင်းပါးနှင့် ပတ်သက်ပြီး တစ်ခုတင်ကြိုပြောထားလိုသည်မှာ မောင်ဖုန်း သည်ဆောင်းပါး ကိုရေးရန် အလွန် အားထုတ်ခဲ့ရပါသည်။ မောင်ဖုန်းသည် နိုင်ငံရေးသမား တစ်ဦးမဟုတ်။ နိုင်ငံရေး အသိပညာ ဗဟုသုတ ချို့တဲ့လှသူလည်း ဖြစ်ကြောင်း ၀န်ခံရပေမည်။ ဤဆောင်းပါးသည် နိုင်ငံ နှင့် ပြည်သူ အတွက် ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ပင်ပန်းစွာ ဖြတ်သန်း တိုက်ပွဲဝင်လာခဲ့သော အမေစု အား အရိုအသေ ပြု ရေးသားခြင်းသက်သက်သာ ဖြစ်သည်။
ထို့အတူ ..မောင်ဖုန်းသည် ..ကိုယ်နားမလည်သော အကြောင်းအရာများကို မဝေဖန် လိုသောသူ ဖြစ်သည့်အတွက် နိုင်ငံရေးရာ များနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး ဝေဖန်မှုတစ်စုံတစ်ရာလည်း ထည့်သွင်းရေးသားမည် မဟုတ်ပေ။ အဖမ်းခံရမှာ ကြောက်သည်ထက် နားကိုမလည် သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ မှန်ရာကိုဝန်ခံရပါမူ နှစ်ပေါင်းများစွာ ..မဟာဘုတ်တိုင်များ နှင့် နာမည်များ တွင်သာ နစ်မြုပ်နေခဲ့သူဖြစ်သဖြင့် စီးပွားရေး/ လူမှုရေး/ နိုင်ငံရေးရာ အသိများတွင်မူ အလွန် နောက်ကျ ကျန်ရစ်ခဲ့သူသာ ဖြစ်သည်။ သူတစ်ပါး ပြောသည်ကို နားလေးစွင့်ပြီး အံ့အားသင့်ယုံမျှ အသိနောက်ကျနေသူ ဖြစ်လေသည်။
မောင်ဖုန်းသိသည်ကတော့ … လူတစ်ယောက်၏ မဟာဘုတ်ခွင် ၊ ထိုသူ၏ နာမည် နှင့် ဘ၀ကံအကျိုးပေးတို့ကို ခန့်မှန်း ထောက်ချင့်…သိသင့်သမျှ သိခြင်းသည်သာ။
အမေစု ၏ ကံဇာတာ
အမေစု (၀ါ) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၀၇ ခုနှစ် ပထမ၀ါဆိုလဆန်း (၁၀) ရက်နေ့ အင်္ဂါနေ့တွင် ဖွားမြင်သည်။ ၁၉ ၊ ၆ ၊ ၁၉၄၅ ခုနှစ် တွင် ဖြစ်၏။ မူလမဟာဘုတ်ဇာတာအရ (၅) ခုကြွင်း အင်္ဂါသမီး ၊ ရာဇဖွား ဖြစ်လေသည်။
အမေစု ၏ မူလ မဟာဘုတ်ဇာတာ
အမေစု ၏ နာမည်သဘာဝကို အခြားဆောင်းပါးအချို့တွင်လည်း ဖော်ပြရေးသားခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ထပ်မံ ဆိုရပါမူ …လူတစ်ယောက်၏ အနာဂတ်ပန်းတိုင် ၊ ရည်မှန်းချက် ၊ ထိုသူခံစားရမည့် ဆုလာဘ် နှင့် ပြစ်ဒဏ်တို့ကို ဖော်ပြသော ..အရေးပါသော နာမည်အဖျားစာလုံး သည် (ကြည်) ဖြစ်ပြီး ..တနင်္လာဂြိဟ်ပိုင်ပညတ် ဖြစ်နေပြီး၊ မူလမဟာဘုတ်ဇာတာ၏ အဓိပတိဌာနတွင် ရပ်တည်နေ၏။
အဓိပတိဌာနဟူသည်ကား …. အင်္ဂါဂြိုဟ်က ပိုင်ဆိုင်ထားသော ဌာနတစ်ခုဖြစ်၏။ အဓိပတိဌာနတွင် ရပ်သော ဂြိုဟ်မှန်သမျှသည် စွေးစွေးနီသော ရဲရင့်မှုဖြင့် လွှမ်းမိုးဆက်နွယ်လာ၏။ အင်္ဂါဂြိုဟ်၏ သတ္တိပင်တည်း။ အမေစု၏ နာမည်အဖျားစာလုံး (ကြည်) သည် တနင်္လာဂြိုဟ်ဖြစ်၏။ တနင်္လာသည် အသင်းအဖွဲ့များ ၊ သင်ယူသင်ကြားသူများ သင်တန်းသားများ ၊ကျောင်းသားများ ၊ လွတ်လပ်စွာ နေထိုင်ခြင်း ၊ ဒီမိုကရေစီဂြိုဟ် ဖြစ်၏။ အဆိုပါဂြိုဟ်သည် အမေစု၏ နာမည် အဖျားစာလုံး (၀ါ) အနာဂတ်ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင် အဖြစ် တွေ့ရှိရပြီး ၊ လက်တွေ့တွင်လည်း အမေစုမှာ … ဒီမိုကရေစီ အရေးအတွက် (လွတ်လပ်မှုအတွက်) ရဲရင့်စွာ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ အလားတူပင် ..ကျောင်းသားများ၊ အသင်းအဖွဲ့များ ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍတို့မှာလည်း အမေစု၏ ဘ၀တွင် အရေးပါသော ကဏ္ဍတို့ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
တနင်္လာဂြိုဟ်သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုင်ရာ ဂြိုဟ်တစ်လုံးဖြစ်ပြီး ၊ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင် ပြည်သူကို ဖော်ပြသော ဂြိုဟ်တစ်လုံး ဖြစ်သည်။ တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်မှာ မူ …နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ မင်းအစိုးရ အုပ်ချုပ်သူ အဖွဲ့အစည်းကို ဖော်ပြသည်။ အဆိုပါဂြိုဟ် နှစ်လုံးသည် အမေစု၏ နာမည်အရင်းစာလုံး နှင့် နာမည်အဖျားစာလုံး များ ဖြစ်နေပြီး ၊ မွေးဖွားရာ မဟာဘုတ်ဇာတာတွင် ..အဓိပတိ နှင့် မရဏ တည်းဟူသော (ပြင်းထန်သောပက္ခ) ကျောရိုးပေါ်တွင် တည်ရှိနေကြပေသည်။
ပက္ခ ဟူ သည်ကား အဘယ်နည်း ။ ပက္ခသည် ဆိုးသည်လော ။ ကောင်းသည်လော ။ မောင်ဖုန်းဖြေ၏။ ပက္ခ ဟူသည်မှာ ကောင်းခြင်း /ဆိုးခြင်းမဟုတ် ။ ဘ၀စိန်ခေါ်မှု တစ်ရပ်သာ ဖြစ်လေသည်။
ဤသို့ဆိုလျှင် အမေစု၏ အမည်အရင်းစာလုံး တနင်္ဂနွေ ( အောင်) နှင့် အဖျားစာလုံး ( ကြည် ) တို့၏ ပက္ခမိခြင်းသည် …
တနင်္ဂနွေ ( မင်းအစိုးရ အုပ်ချုပ်သူများ ) နှင့် တနင်္လာ (ပြည်သူ) တို့ ကြားမှ
တနင်္ဂနွေ ( အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ) တနင်္လာ (လွတ်လပ်မှု) သဘောအရ ……
လွတ်လပ်စွာ အုပ်ချုပ်ရေး အတွက် ..ဘ၀စိန်ခေါ်မှုမျိုး ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ယင်းအချက်သည်ပင်လျှင် အမေစု ၏ ဘ၀ရည်မှန်းချက် ၊ ယင်းအချက်သည်ပင်လျှင် အမေစု ၏ ပန်းတိုင် ၊ ယင်းအချက်သည်ပင်လျှင် အမေစု မျှော်မှန်းရည်သန်ရာ ဖြစ်သတည်း ။
ဤနေရာတွင် လွတ်လပ်မှု နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးကို မည်သည့်အတွက်ကြောင့် တွဲစပ်ထားရသနည်းဟု မေးရန် အကြောင်းရှိ ပေမည်။ ပက္ခဟူသည်တို့မှာ အစဉ်အမြဲ တွဲစပ်နေကြပြီး ၊ ဆီလျော်အောင် ညှိနှိုင်းတွဲစပ်နိုင်မှ အကျိုးဖြစ်စေ သောကြောင့် ဖြစ်ပေသည်။
တိုင်းပြည်တစ်ပြည်တွင် လွတ်လပ်မှုဟူသည်မှာ လိုအပ်သလို ၊ စည်းကမ်း နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး ဟူသည်မှာလည်း မဖြစ်မနေ လိုအပ်သော အချင်းအရာ ဟု မောင်ဖုန်း ယူဆမိပေသည်။ လွတ်လပ်လွန်း၍လည်း မကောင်း ၊ စည်းကမ်းတင်းကျပ် ချုပ်ခြယ်လွန်း ကလည်း မသင့် ၊ ထိုနှစ်ခုကြားတွင် သမာသမတ် အလယ်လမ်းမှ ဆောင်ရွက်ခြင်းသည်သာ အသင့်လျော်ဆုံး ဖြစ်ပေခြိမ့်မည်။
အမေစုသည် အဆိုပါ တနင်္ဂနွေ/မရဏ (နာမည်အရင်းစာလုံး) နှင့်တနင်္လာ/အဓိပတိ (နာမည်အဖျားစာလုံး) ပက္ခ ၏ ဘ၀စိန်ခေါ်မှုများ ကို ကာလရှည်ကြာရင်ဆိုင် တိုက်ပွဲဝင်နေသူ ဖြစ်လေသည်။ ထို့အချက်ကြောင့်ပင်လျှင် မောင်ဖုန်းသည် အမေစုကို ရိုသေ၏ ။ ထိုအချက်ကြောင့်ပင်လျှင် မောင်ဖုန်းသည် အမေစု ကိုလေးစားအပ်ပေသတည်း။ အလွန်ဇွဲကောင်းပြီး ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာသော ပြည်သူ့မိခင်သဖွယ် အမျိုးသမီးကြီး တစ်ဦးပါပေ။
အမေစု၏ ဘ၀ခရီးပေါ်မှ ကံဇာတာ
အဆိုပါကာလသည် အမေစု ၏ အသက်အားဖြင့် … ၅၄နှစ်တင်းတင်းပြည့်ပြီးချိန်မှ အစပြုကာ ..အသက်အားဖြင့် ၆၆နှစ် တင်းတင်းပြည့်ချိန်ထိ တိုင်အောင် ကြာမြင့်၏။ ရာဟုဂြိုဟ်အိပ်သည် အမေစုအား မည်သို့အကျိုးအပြစ်ပြုနိုင်သနည်း။
ရာဟုဂြိုဟ်အိပ်ကာလတွင် အထက်သန်ဆုံး အားအကောင်းဆုံး တောက်ပလာသည်မှာ တနင်္ဂနွေဂြိုဟ် ဖြစ်၏။ ထိုတနင်္ဂနွေသည် အမေစု( အင်္ဂါသမီး) အတွက် သြကာသကာရက ဂြိုဟ်ဖြစ်နေ၏ ။ ထိုတနင်္ဂနွေသည်ပင် မူလမဟာဘုတ်တွင် မရဏဌာနတွင် ရပ်တည်ထားသော ဂြိုဟ်ဖြစ်နေ၏။
တနင်္ဂနွေသည် ဇာတာရှင် အမေစု အတွက် သြကာသာကာရက သဘောဖြင့် ပြုခြင်းကြောင့် .. ၊
ထို ဆယ့်နှစ်နှစ်တာတည်းဟူသော ရာဟုဂြိုဟ်အိပ်ကာလအတွင်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သမျှ အချင်းအရာ အမှုကိစ္စတို့မှာ အဆုံးတိုင် မပြီးမြောက်ဘဲ ၊ တစ်ပိုင်းတစ်စ အခြေအနေများဖြင့် သာ ရှိနေရခြင်း၊ အခြေအနေအိုင့်နေခြင်း ၊ တုံ့ခြင်း ၊ အီခြင်း မျိုးတို့သည်သာ ပေါ်ပေါက်လာရတတ်၏။ finishing အဆင့်အထိ မရောက် ။ မပေါက် ။ မဖြစ်မြောက်အောင် တားဆီးတတ်သော ဂြိုဟ်မျိုးဖြစ်၏။ အဆိုပါဂြိုဟ်သည်ကား မရဏဌာနရှိ တနင်္ဂနွေဖြစ်ပေသတည်း။ အဆိုပါဂြိုဟ်သည် ရာဟုဂြိုဟ်အိပ်ကာလ ဖြစ်သော (၅၄-၆၆) အသက်ပိုင်းအတွင်း ကြီးမားစွာ လွှမ်းမိုးထားလေသည်။
ထိုဂြိုဟ်သည် အဆိုးသက်သက်လော ။ မဟုတ် ။ တိုင်းတစ်ပါးမှ ပေးသော ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူးရရှိခြင်း ၊ ချီးမြှင့်ခံရခြင်း တို့ကိုလည်း ပေး၏။ တနင်္ဂနွေသည်ကား ဆုလာဘ် ၊ မရဏသည်ကား တိုင်းတစ်ပါး ကို ဖော်ညွှန်းနေကြ၏။
ယခုအချိန်အခါ သမယကား ရာဟုဂြိုဟ်အိပ်၏ နောက်ဆုံးအထွက်ကာလဖြစ်၏။ အသက်အားဖြင့် ၆၆ အတွင်း အမေစုသည် ချဉ်းနင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ခြင်းကြောင့် များမကြာမီ ရာဟုမှ လွတ်မြောက်တော့မည် ဖြစ်ပေသည်။ ရာဟုပြီးလျှင် ..ဆက်လက်ဖြတ်သန်းရမည့် ဂြိုဟ်အိပ်မှာ သောကြာဂြိုဟ်အိပ်ကာလဖြစ်ပြီး ၊ အမေစု ၏ အသက်ပိုင်းအားဖြင့် (၆၇-၈၇) အတွင်း အုပ်စိုးထားပေသည်။
အဆိုပါသောကြာဂြိုဟ်အိပ် ကာလအတွင်း အမေစု၏ အမည် တွဲ ဖြစ်သော (တနင်္ဂနွေ + တနင်္လာ) သည် ..စတုရန်း နှင့် တြိရန်း ကြိုးတွင် ပါဝင်နေခြင်း ၊ …..
အဆိုပါသောကြာဂြိုဟ်အိပ်ကာလတွင်မူ …အားအင်ကြီးမားစွာလွှမ်း မိုးလာသော ဂြိုဟ်မှာ အင်္ဂါဂြိုဟ်ဖြစ်ခြင်း၊ …. အင်္ဂါဂြိုဟ်သည် ရန်ပြုတတ်သောသူ ၊ ဘေးရန် အန္တရယ် နှင့် အပြိုင်အဆိုင် လုပ်သူတို့ကို ကြီးစိုးခြင်း ….အဓိကအားဖြင့် (ရန်) ကြုံခြင်း ….
မူလဖွားဇာတာမဟာဘုတ်တွင် အင်္ဂါသမီး ၏ အာယုဂြိုဟ် ၄ဟူးသည် မကြာမီ ရောက်ရှိတော့မည့် သောကြာဂြိုဟ်အိပ်ဖြင့် ပက္ခပြုခြင်း ( ဆန့်ကျင့်မှုပြုနေခြင်း) …. တို့ကို တင်ကြိုတွေ့ရှိနေရပါသည်။
မောင်ဖုန်း သည်ဟောကိန်းမျိုး မထုတ်လိုပါ။ သို့သော်…သက်ဆိုင်သူ အမေကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ ၊ အမေစု နှင့် အနီးနားမှ အကျိုးလိုလားသူ တစ်စုံတစ်ဦး ဖြစ်စေ ယခုဆောင်းပါးကို ဖတ်ရှုမိပြီး ၊ သတိ နှင့် တင်ကြို ဆောင်ရွက်ဖွယ်ရာအချို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်သည် ဖြစ်စေရန် အခြားတစ်ဖက်မှ မျှော်လင့်မိခြင်းကြောင့် ရေးသားရခြင်းသာ ဖြစ်ပေသည်။ အဆိုပါသောကြာဂြိုဟ်အိပ် ကာလအတွင်း …အမေစု၏ အသက်ရှင်သန်မှုကို .. အားနဲစေသော အချင်းအရာ အချက်အလက်များ တင်ကြိုတွေ့မြင်နေရကြောင်း ယခုဆောင်းပါးမှနေပြီး သတိပေးအပ်ပါသည်။ ထို့ထက်လည်း ပိုမရေး ပိုမဟောလိုတော့ပါ။ မောင်ဖုန်း၏ ဟောဆိုချက် တင်ကြိုတွေ့ရှိနေသည့်အချက်များကိုလည်း ချွတ်ချော်တိမ်းစောင်း မှားယွင်းစေလိုပါသည်ခင်ဗျား။
အခြားတစ်ပါးအားဖြင့် ထပ်မံတွေ့ရှိရသည်မှာ ..ကြာသာပတေးဂြိုဟ်သည် အမေစုအား ဒုက္ခများစေတော့မည် ဖြစ်သဖြင့် ၊ ကြာသာပတေးနံ များ ၊ ကြာသာပတေးသားသမီးများ ၊ ကြာသာပတေးနံ (ပ၊ဖ၊ဗ၊ဘ၊မ) ဖြင့် မှည့်ခေါ်ထားသော လူ၊ မြို့ရွာ ၊ အကြောင်းအရာများကို ..ဂရုပြုအပ်ရတော့မည့် ကာလများ ရောက်ရှိလာတော့မည် ဖြစ်ပါသည်။
အမေစုသည် မိမိနှင့်တိုက်ရိုက်မဆိုင်သော အချင်းအရာများအတွက် အခက်အခဲဖြစ်ရတတ်ပြီး ၊ တနည်း သူတစ်ပါးကြောင့် မိမိပါ အခက်အကြုံရတတ်ပြီး ၊ အထူးသဖြင့် ကြာသာပတေးသည် အတွင်းမိတ်ဂြိုဟ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ၊ အတွင်းလူ အတွင်းကျကျ ရောက်ရှိနေသောသူထဲမှ သစ္စာမဲ့စွာ ပြုခြင်းမျိုး ကြောင့် ဖြစ်စေ …အခက်အခဲအချို့ ရင်ဆိုင်ရဖွယ်ရာ ရှိနေပါသည်။
အလားတူပင် အဆိုပါ ကြာသာပတေးသည် .. ၊ ဖောင်းပွမှု ..ပြန့်နှံ့မှု ဆိုင်ရာ ပြသနာမျိုးကို ပြုတတ်သောကြောင့် ..အမေစုအနေနှင့် ထိမ်းသိမ်းရခက်ခဲသော အခြေအနေအချို့ ရင်ဆိုင်ရမည် ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ အထက်ပါကဲ့သုိ့သော အချင်းအရာများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ရှိသော် ..အမေစုအနေနှင့် နံ့သာရောင် ၊ ၀ါညိုရောင်များကို အဖြစ်နိုင်ဆုံး ရှောင်ဖယ် အသုံးပြုသင့် သည်ဟု မောင်ဖုန်း ယူဆမိပါသည်။ အရောင်များသည် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ နှင့် အနေအထားကို တိုက်ရိုက်လွှမ်းမိုးမှု ကြီးမားတတ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေသည်။
၀မ်းသာဖွယ်ရာ ဟု ယူဆမိသောအချင်းအရာ ကတော့ …..
အဆိုပါ သောကြာဂြိုဟ်အိပ်ကာလသည် ရှေးကနည်းတူ (ရာဟုဂြိုဟ်အိပ်ကာလများကဲ့သို့) တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်က လွှမ်းမိုးထားမှု မရှိတော့ပဲ အင်္ဂါဂြိုဟ်က လွှမ်းမိုးလာတော့မည်ဖြစ်ခြင်း ။…………
အဆိုပါအင်္ဂါဂြိုဟ်သည် အမေစု ၏ မွေးနံ ဖြစ်ခြင်း …….
အဆိုပါအင်္ဂါဂြိုဟ်သည်ပင် စေ့စပ်ခြင်း ၊ခွဲဝေခြင်း ၊ ညီတူမျှတူပြုခြင်း ၊ စွမ်းစွမ်းတမံဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း ၊ တို့ကို အစိုးရခြင်း ………..
အဆိုပါအင်္ဂါဂြိုဟ်သည်ပင်လျှင် …. အမေစု မွေးမူလ မဟာဘုတ်ဇာတာ၏ ရာဇဌာနနေဂြိုဟ်ဖြစ်ခြင်း ၊ (ရာဇ ဌာန ရှိဂြိုဟ်သည် …ထိုဇာတာရှင်၏ အနာဂတ်စီမံကိန်းများ နှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေ၏။)
သောကြာဂြိုဟ်အိပ်သည် …စပ်တူ အစုစပ် ၊ ခွဲဝေပိုင်းခြား ဆက်စပ်ခြင်းမျိုးကို လှုံ့ဆော်မှုပြုခြင်း ၊
အင်္ဂါဂြိုဟ် အားကောင်းချိန်တွင် … မိမိသတ်မှတ်ထားသော တွက်ကိန်းများ အရ ..တိတိကျကျ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ခြင်း ….
စသည်ဖြင့် …. အားကောင်းလာသော အချင်းအရာအချို့ကိုလည်း တွေ့မြင်နေရပါသဖြင့် ….၊ မောင်ဖုန်းတို့ ပြည်သူများလည်း ကံအားသာလာပါလျှင်…အမေစုသည် စစ်တပ် (လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း) တို့နှင့် ညှိနှိုင်းမှု ညီညွတ်ပြည့်စုံခြင်းသို့ ရောက်ရှိနိုင်ပြီး ၊ တိုင်းပြည်လည်း မဆူမပူ ၊ ကစဉ့်ကလျား မဖြစ်မူဘဲ ၊ …တိုးတက်ခြင်းသို့ တိုင်ပေ လိမ့်မည် ဟု မောင်ဖုန်း ယုံကြည်မျှော်လင့်မိပါတော့သည်။
ထင်ရှားသောအချက်တစ်ရပ်မှာမူ ..အဆိုပါသောကြာဂြိုဟ်အိပ်အတွင်းသို့ ရောက်ရှိချိန်မှ အစပြုပြီး ၊ အမေစု သည် ရှေးယခင်က နှင့်မတူ ..ထူးခြားသော အခြေအနေများကို ကြုံတွေ့ရခြင်း ၊ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် မဟုတ်သော ၊ ရှေးကနှင့် မတူသော လုပ်ဆောင်မှုများကို လုပ်ကိုင်လာရတတ်ခြင်း ၊ စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ အားဖြင့်လည်း အလွန်မြန်ဆန်လာသလို … shortcut အသုံးပြုလုပ်ကိုင်ခြင်းမျိုးဖြင့် ..အမေစု တွင် အောင်မြင်မှု ရရှိနိုင်ကြောင်းကို ထင်ရှားစွာတွေ့ ရှိရခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ….
အနှစ်ချုပ်ဆိုရပါမူ ..အမေစုအား သောကြာဂြိုဟ်အိပ်ကာလအတွင်း .. အသက်ရှင်သန်ရေး / ကျန်းမာရေးတို့ အတွက် စိုးရိမ်မိပြီး ၊ အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်အချို့အတွက်မူ အောင်မြင်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မည် ဟု ယုံကြည် ယူဆမိပါကြောင်း ။
နောက်ဆုံးအဆင့် …မောင်ဖုန်းအယူအဆအရ …(လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း) များအပေါ် တွင်လည်း အမြင်တိမ်းစောင်းမှု မောင်ဖုန်းတွင် မရှိပါပေ။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း ဟူသည်မှာလည်း အလွန်အရေးကြီးလှပေသည်။ လူတစ်ယောက်တွင် လက်ရုံးရည် နှလုံးရည် နှစ်ပါးစလုံး ပြည့်ဝနေမှ ပြည့်စုံသူဟု ဆိုနိုင်သကဲ့သို့ပင် ၊ ဥာဏ်ချည်း သက်သက်ရှိမူ ..လက်ရုံးအားကိုးပြီး အနိုင်ကျင့်သည်ကို ခံရတတ်ပေသည်။ လက်ရုံးရည်ကော နှလုံးရည်ပါ ဘက်စုံပြည့်ဝနေပါမှ ..လူတော်လူချွန် ပြည့်စုံသူ ဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့ပင် ၊ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်တွင်လည်း လက်နက်ကိုင်ဆောင်သူ အဖွဲ့အစည်းများ လည်း အရေးကြီး၏။ အရေးပါ၏ ဟု ဆိုနိုင်ပေသည်။ အလားတူပင် …နိုင်ငံရေးရာ အသိပညာနှင့် နိုင်ငံချစ်စိတ် ကြီးမားသော အမေစုကဲ့သို့ ….နှလုံးရည်ပြည့်ဝသူများသည်လည်း နိုင်ငံတိုးတက်ရေးတွင် အရေးပါလှသည်သာ ဖြစ်ပေသည်။ ထို့ကြောင့်………..
လက်ရုံးရည်နှင့်တူသော နိုင်ငံ၏ စစ်တပ် နှင့်
နှလုံးရည်နှင့် တူသော နိုင်ငံ၏ မိခင်အမေစု တို့ ၏
အတူတစ်ကွ လက်တွဲညီညာ တိုးတက်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ဖို့အရေးကိုသာ…..
တစ်ထွာတစ်မိုက်သာသာ ဥာဏ်ပညာ ဖြင့် မောင်ဖုန်း မျှော်ကိုး မိပါတော့သတည်း။
Posted by Sayarphone at 9:52 PM Labels: ထင်ပေါ်ကျော်ကြားပုဂ္ဂိုလ်များ